धनुषा: पन्ध्र साेह्र लाखकाे सम्पत्ति लिएर श्रीमती फरार, छाेराछाेरी विचलित – खोज केन्द्र
» प्रदेश » समाचार » समाज अंक: 7892
धनुषा: पन्ध्र साेह्र लाखकाे सम्पत्ति लिएर श्रीमती फरार, छाेराछाेरी विचलित
खोज केन्द्र सोमबार, साउन ०४, २०७८ मा प्रकाशित
आमा अर्कैसँग गएपछि धनुषामा एक घरपरिवारकाे छाेराछाेरीहरू विचलित भएका छन् । धनुषाकाे धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने गुडिया देवी साह अर्कैसँग गएपछि उनका छाेराछाेरीहरू विचलित भएका हुन् ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका १ बस्ने विन्देश्वर साह तथा किरण देवी साहकी छाेरी गुडिया देवी गएकाे असार ७ गते घरपरिवार छाडेर हिँडेकी हुन् ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनका पति रामप्रकाश साहले करिब ४/५ वर्ष पहिले देखिनै मिथिला नगरपालिका ७ बस्ने विङगर चालक घुरन यादवसँग पत्नीको सम्बन्धमा रहेकाे खुलासा गरे । याे कुरा छाेराछाेरीसमेत थाहा पाएकाे र आफुले श्रीमतीलाई यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर पटक पटक सम्झाएको पनि बताए ।
धारापानीकाे मुख्य चाेकमा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएकी गुडियाकाे चिनजान घुरनसँग फलफूल ल्याउने क्रममा भएकाे बताइन्छ। सामान्य चिनजानलाई सम्बन्ध राखी म र मेराे घरपरिवारकाे प्रतिष्ठा गुमाएकाे उनकाे भनाइ छ।
करिब १ वर्ष अगाडि गुडिया र घुरन महेन्द्रनगरस्थित ससुराली घरमा सँगै सुते/बसेका कुरा उनकी कान्छी छाेरी दिपिकाले देखेपछि बुबालाई भनेकी थिइन्। त्यसपछि पति रामप्रकाशले श्रीमतीलाई गलत काम नगर्न पटक पटक सुझाव पनि दिए।
गुडियाकाे अबैध सम्बन्धबारे उनका आमाबुबालाई आफुले जानकारी गराएपनि बेवास्ता गरेकाे र उल्टै मलाई नै धम्की दिने गरेकाे उनले आराेप समेत लगाए । आमाबुबाकै संलग्नतामा गुडिया विङगर चालकसँग फरार भएकाे रामप्रकाशकाे कथन छ।
गुडिया घरबाट नगद साँढे ५ लाख र विभिन्न बैंकमा बचत गरेकाे रकम करिब ५ लाख तथा आफुले प्रयाेग गरिरहेकाे ४ ताेला र छाेरीकाे साँढे ४ ताेला सुन लिएर फरार भएकी हुन् ।
उनले विङगर चालक घुरनसँग श्रीमती भागेकाे कुरा विङगर साहु रूपलालकी श्रीमतिबाट आफुले थाहा पाएकाे बताए ।
यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरमा असार १० गते किटानी जाहेरी परिसकेको छ । तर, हालसम्म प्रहरीले यसबारे कुनै चासाे नदेखाएको उनले बताए ।
गुडियाकाे आमाबुबासँग सम्पर्क हुन सक्ने भन्दै ९८२६८६६६६९, ९८१६८५१६३५, ९८२४८५९२६२ नम्बर सार्वजनिक समेत गरे ।
रामप्रकाश र गुडियाका जेठी छाेरी राधा साह १३ वर्ष, छाेरा मञ्जित साह ११ वर्ष, छाेरी ज्याेती साह ७ वर्ष र कान्छी छाेरी दिपिका साह ४ वर्षका छन् ।
करिब १५/१६ लाख बराबरको सम्पत्ति लगेपछि कलिला छाेराछाेरीकाे बिचल्ली हुने भन्दै रामप्रकाशले घर तथा बैंकबाट लगेकाे रकम र सुन फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै मिडियामा आएकाे बताए ।
वि.सं. २०६३/६४ तिर रामप्रकाश र गुडियाकाे विवाह भएकाे बताइएको छ। उनीहरूले मागी विवाह गरेका थिए।